Ra`iisal wasaarihii dalka Swedan Stefan Löfven oo xilka laga tuuray, xukuumaddiisana dhacday: SAWIRRO – Calanka.com
Ra`iisal wasaarihii dalka Swedan Stefan Löfven oo xilka laga tuuray, xukuumaddiisana dhacday: SAWIRRO
Dowladdii Sweden ayaa maanta la riday kadib markii Stefan Lofven uu noqday ra’iisul wasaarihii ugu horreeyey dalka ee waaya codka kalsoonida, taasi oo macnaheedu yahay inuu is-casilo ama ku baaqo doorasho deg deg ah.
Mooshinka codka kalsoonida ayaa lagu ansixiyey ayada oo ay taageereen aqlabiyadda xildhibaano gaaraya 181 oo ka mid ah 349-ka kursi ee baarlamanka.
Mooshinka ayaa waxaa Khamiistii diiwaan geliyey xisbiga midigta-fog ee Sweden Democrats (SD), kadib markii Lefty Party, oo taageerayey dowladda uu ku dhowaaqay inuu qorsheynayo inuu taageero mooshinka, si uu ashtako uga muujiyo mashruuca ay dowladda ku qafiifineyso xakameynta kirada guryaha, taasi oo ay ugu yeereen tallaabo lagu weeraray hanaanka bulsho ee Sweden.
Xisbiga muxaafadka ee Moderate Party iyo xisbiga Christian Democrats ayaa sidoo kale deg deg ugu dhowaaqay inay taageerayaan tallaabadan, taasi oo xaqiijisay aqlabiyad.
Lofven waa ra’iisul wasaarihii ugu horreeyey dalka ee waaya codka kalsoonida, waxayna ka dhigan tahay inay burburtay dowladdii ay ku mideysnaayeen xisbiyada Social Democrat iyo Green Party.
Xasaraddan ayaa waxaa dhaliyey mashruuc weli maraya xaalad horudhac ah, oo dib u habeyn loogu sameynayo maamulka dowladda ee kirada guryaha, kaasi oo albaabada u furaya in dadka leh daaraha cusub ee la dhisayo ay ayaga goyn karaan qiimaha kirada.
Qorshahan ayaa waxaa loo arkay mid halis ku ah hanaanka bulsho ee Sweden iyo dadka kireysanaya guryaha.
Lofven ayaa waxa uu hadda haystaa hal toddobaad, si uu go’aan uga gaaro inuu ku baaqo doorasho deg deg ah, ama uu is-casilo, taasi oo macnaheedu yahay in afhayeenka baarlamanka uu billaabi karo wada-xaajoodyo u dhaxeeya xisbiyada si ay usoo doortaan musharax buuxin kara xafiiska.
Xildhibaannadii ugu horreeyey ee Aqalka Sare oo lagu doortay Jubaland
Xubnihii ugu horreeyay ee Aqalka Sare ee baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta lagu doortay Jubaland iyadoo ay billaabatay doorashada Soomaaliya, kadib… Read More ›
NORWAY: Dhagxo iftiimaya oo kusoo dhacay nawaaxiga caasimadda Oslo
Dadka reer Norway waxaa amakaag ku reeb walxo iftiimaya oo ka soo dhacaya cirka, xilliga habeenkii kaasi oo lagu arkay… Read More ›
Gabadhii feerka u mataleysay Soomaaliya ciyaaraha Olombikada Tokyo oo laga adkaaday
Ramli Cali oo Soomaaliya ku mataleysay tartanka ciyaaraha feerka ee ka socday magaalada Tokyo ee dalka Japan ayaa looga adkaaday… Read More ›
AFHAYEENKA TALIBAN: ‘Haddii nabad la rabo madaxweynaha Afghanistan ha is-casilo’
Ururka Taalibaan ayaa sheegay iney dooneyn talada dalka Afghanistan iney xoog ku marookistaan, waxayna carrabka ku dhufteen iney marnaba suuragalayn… Read More ›
Ra`iisal wasaare Rooble oo xilka ka qaaday saraakiil ka tirsanaa Nabad-sugidda Qaranka (NISA)
Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya ayaa xilka ka qaaday laba sarkaal oo ka tirsan Hay’adda Nabad Sugidda Soomaaliya. Af-hayeneka Xukuumadda Soomaaliya, Maxamed… Read More ›